I-Apple inokuveza ii-AirPods ezintsha kwi-WWDC ngoJuni | Ndisuka mac
Siqala iveki ngentetho entsha evela kwi-JPMorgan, inkampani yemali ayisiyiyo okokuqala ukuba nesibindi sokuqinisekisa izinto malunga nokukhutshwa okulandelayo kweapile elilumkileyo, ethi ekugqibeleni ibe yinyani.
Kule meko ibe yi-iPhone 7s, 7s Plus kunye ne-iPhone 8. Ngokuthe ngqo, amarhe aqinisekisa izinto ezithile malunga noyilo lokugqibela olunokwenzeka kwezi fowuni zintsha, ichaze imveliso esixoxa ngayo kwibhlog yethu, ii-AirPods.
Uninzi lwabasebenzisi namhlanje abalinde ezabo AirPods Kwaye kukuba nakwiVenkile yeApple uqobo, isitokhwe sazo siyintloko yabalandeli. Zimbalwa iiyunithi ezifika veki nganye ukubhabha kwimizuzu nje embalwa ngelixa ukulinda kangangeeveki ezintandathu kungawi kwi-Intanethi.
Sithetha okokuqala ukuba kwimveliso yeapile elunyiweyo kunzima ukuzinzisa isitokhwe sayo, ke ayiloxesha lokuqala ukuba sizive kwaye sicinge ukuba emva kwayo yonke le nto kukho enye into. Enye into ibonakala inento yokwenza nolu daba lokuba sifuna ukuphawula ngalo namhlanje.
Inyani yile yokuba i-JPMorgan iyangqina ukuba ii-iPhones ezintathu ezintsha ziya kufika, i-7s, i-7s Plus kunye noluhlu oluphezulu okanye uhlelo olukhethekileyo, i-iPhone 8. Kwaye ngokuchanekileyo yile iPhone, i-iPhone 8 ekuthiwa yi-Apple ingabandakanya okokuqala kwimbali uthotho lwee-AirPod endaweni yee-EarPods. Esi inokuba sesinye sezizathu zokuba iApple ingabinakho ukujongana nokuvelisa iiAirPods kwaye yiyo loo nto iya kuba kukuvelisa iziqwenga ukuze babenako ukubanakho kwesitokhwe esifanelekileyo ukubandakanya into eza kuba yi-iPhone abaza kuyithengisa njengeedonathi.
Ke ukuba ucwangcisa ukuthenga i-iPhone elandelayo, bendilinde kancinci ukubona ukuba kuyinyani na into ethi i-iPhone 8 iya kuba neyunithi ye-AirPods ehlaziyiweyo njengomgangatho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple inokuthi ityhile ii-AirPod ezintsha ngoJuni WWDC
Umxholo ophambili uthi "I-Apple ingazisa ii-AirPods ezintsha" kodwa iindaba zithetha malunga ne-iPhone 8 ekucingelwa ukuba ibandakanya ii-AirPods, ngaphandle kwemodeli entsha ye-AirPods.
Makhe sibone ukuba siyacacisa na kuba isihloko kunye neendaba zahluke kakhulu.
Ukuba kuphela oku kuya kubabandakanya, andiyikucima (de kube ngoJuni abafiki) kuba andizukuyithenga i-iPhone 8, enye into kukuba yimodeli entsha, ethi ke ukuba ndiyakulinda (nangona ndiza kuzithenga ndedwa)
Sawubona uDiegus, xa sithetha ngee-AirPods ezintsha, kweli nqaku sigxile kwindumasi yokuba ezo AirPods zintsha ziza kufika ne-100th yesikhumbuzo se-iPhone. I-Apple iyakube ilungiselela uphononongo lwazo oluza kukhutshwa kuloo iPhone hayi ngaphambili. Into esingenakuqinisekisa ngayo kukuba ezo AirPods ziya kuthengiswa ngezi ndaba ngokwahlukeneyo ukuba, ngendlela yam yokucinga, ngokuqinisekileyo baya kuyenza. Asinakukuqinisekisa nge-XNUMX% kuba ngamarhe enethiwekhi. Ungandwendwela ezinye iiblogi ezininzi ezikhethekileyo ebaleni, kubandakanya nabantu baseMelika, ukuqinisekisa ukuba ukuhluza kulungile. Enkosi ngokufunda! Ndinezi zangoku kwaye ndinokuxelela ukuba ndiyaphambana nazo.
Ke abo bethu sele benazo, xa sithenga iphone 8 bazakusinika isaphulelo, akunjalo? (Imowudi yokugculela ivuliwe)
Mva kwemini uAlejandro, amarhe alandelwe kumnatha kukuba iApple izakufaka ii-AirPods ezithile kwi-iPhone yesikhumbuzo seminyaka elishumi. Ezo headphone ziya kuba luphononongo lwangoku kuba iApple iya kufuna yonke into ehamba nemveliso entsha ukuba ibe yinoveli kwaye amarhe athetha ukuba ezi AirPods zintsha ziya kubandakanya iindaba ezingakhange zithathelwe ingqalelo kwimodeli yangoku. Asinakuqinisekisa i-100% ukuba oku kuya kuzalisekiswa kuba kungamahemuhemu. Asinokwazi ukuba olo tshintsho luya kwenziwa kwi-AirPod ngokukodwa okanye hayi. Enkosi ngokufunda!
Phambi kwamarhe anje kwaye ukuba awungxamanga bendiya kulinda ukubona amanyathelo athathwa nguApple. Ukuthenga imveliso yeApple kufutshane nomboniso onjengeWWDC kuyingozi, ngakumbi ngendlela elishushu ngayo ilizwe leapile kunye neshumi leminyaka le-iPhone.
Ulwazi oluthe kratya malunga nemoto ezinokuzimela yeApple